7'S in Guba | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! 7'S in Guba | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Ma aha oo dhan mishiinada qaado wareeg bonus kala duwan, fidiyana iyo wilds. 7'S in Guba waa mid ka mid sahlay kulanka naadi mobile sida in ay ka dhigan tahay theme ah classic aad u wanaagsan.
Games Sayniska bixisaa naadi oo faano of technology ka xoogbadan, oo waxaad bixisaa farax in ciyaartoyda. Shirkadda ahaa mid ka mid ah marka hore si ay u abuuraan kulan ammaan dagdag ah bakhtiyaa jidka ku soo laabtay 1974.
kala duwan ee sharadka ay bixiyaan Afyare this online waa 25p in 2 si wareejin. Intaa waxaa dheer, aad qabto doorashada ee rullaluistemadka Hi dhigeeysa in kici lahaa 20 shan dhigeeysa leh faa'iidooyin dheeraad ah. Waxaa jira oo keliya saddex duntu iyo shan khadadka guul go'an in booska this online. Inta badan calaamadaha waa laba laba ka mid ah liin, jeeriga, watermelons, baararka double, xiddigaha, dawanno, plums, liin. ka walxood kuwaas oo marka laga reebo, waxaa jira a 77 icon ee midabka cas iyo sidoo kale wax gubaya kulul 77 icon. Labada caadiga ah 77 Astaanta iyo gubashadii 77 ficil calaamad sida wilds ah, badalaa waayo, kulli calaamadaha kale. Marka la barbardhigo ugu weyn ee ka dhexeeya labada waa heshay ay bixiyaan. Iyadoo caadi ah 77 icon aad ku dhaco 100 jeer Ghanna for caga seddex ka mid ah on line guul ah, gubashadii 77 icon aad abaalmarinta a 250 jeer Ghanna helo saddex on line guul ah. Si ka duwan kulan online kale, halkan waa ciyaartoyda oo go'aan haddii ay doonayaan inay ciyaaraan kasta feature dheeraad ah.
Muuqaaladan dheeraad ah optional in booska this online waxaa ka mid ah:
1. Hi dhigeeysa rullaluistemadka- Kuwani dhigeeysa sare ku shaqeeya oo aad ku kici doona in ka badan bet caadiga ah oo aad ka heli nus ka mid ah abaalmarinta caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiro fursad weyn helitaanka fursadaha guusha sare sida, kuwaas oo shan dhigeeysa rullaluistemadka Hi leeyihiin gubashadii 77 walxood oo lagu badalaa waayo, dhammaan walxood oo kale.
2. khamaar Feature- Inta lagu guda jiro wareejin ah, ciyaartoyda ayaa go'aansan kara in ay qaataan doorasho Gamble ah. Si aad u qaadato Doorashadan, si fudud u ku dhacay button Gamble marka wareejin ah waa in horumar. Waxaad ka heli heshay 2x haddii aad ku guuleysato iyo haddii aadan ku guuleysan, markaas waxba bedelay.
Tani Afyare online waa ciyaar aan dhib badnayn oo kaas oo u ogolaanaya ciyaaryahan inuu qaato call hadii ay doonayaan inay u tagaan bonus ku wareegsan ama ma. soo celinta boqolkiiba ciyaaryahan ay bixiyaan this ciyaarta naadi mobile waa 95.10%.